ကျောက်ကွက်များ | ကြမ်းပြင်ကွက်များ | မြို့ရိုးကိုကွက်များ | 24x24 | 12x12 | Flodeal
ကျောက်အုပ်ကြွပ်ကောင်တာများအောင်များအတွက်အလွန်လူကြိုက်များအုပ်ကြွပ်များမှာ, ကြမ်းပြင်ကိုတင်သော, ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်, နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. အဆိုပါအုပ်ကြွပ်ခွန်အားဖြစ်ကြ၏, ဓာတုခံနိုင်ရည်နဲ့အလွယ်တကူ implacable. ဤသူအပေါင်းတို့သည်အုပ်ကြွပ်ကသဘာဝကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ကြွပ်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်မဟုတ်တဲ့အရောင်နှင့်အတူချိန်ညှိနေကြတယ်, သားရေနှင့် honed ပြီး.
ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအထူနှင့်အရွယ်အစားရှိအကြွပ်ဖြတ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် tile ကွဲပြားခြားနားသောကျောက်၏အုပ်ကြွပ်အောင်ပင်နှင့်စကျင်ကျောက်များ. အောက်ပါလူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစားများမှာ :
ကျောက်၏အုပ်ကြွပ်အတွက်ဖြတ်နေကြတယ် 1 စင်တီမီတာ 1.5 စင်တီမီတာနှင့်2ယေဘုယျအားဖြင့်စင်တီမီတာ. အဆိုပါ 1 စင်တီမီတာနှင့် 1.5 စင်တီမီတာမြို့ရိုးကိုကြွပ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်, ဘယ်မှာ2စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်အခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်. အဆိုပါ 1 စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်ကောင်တာများအောင်အဘို့လည်းအသုံးပြုကြသည်.
အဖြူနှင့်အနက်ရောင်အုပ်ကြွပ်လူကြိုက်အများဆုံးအုပ်ကြွပ်များမှာ. အခွားသောအရောင်အုပ်ကြွပ်စီမံကိန်းများ၏ဒီဇိုင်းနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့ကျောက်အုပ်ကြွပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်အောက်ပါအရောင်များကိုဖြတ်တောက်ထားပါသည် :
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်
Black ကက Galaxy ကျောက်
ခေါင်းဆောင် Hassan အစိမ်းရောင်ကျောက်
Verde Marina ကျောက်
သံမဏိ Grey ကကျောက်
Viscon White ကကျောက်
ကက်ရှမီးယား White ကကျောက်
နယူးမြစ် White ကကျောက်
Rajasthan က Black ကျောက်
ရှေ | အဝါရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
Hawa Magri, Sukher စက်မှုဇုန်ဧရိယာ, Udaipur, အိန္ဒိယ
မိုဘိုင်း: +91 - 95719 - 98798
မူပိုင် 2012 - 2019 Flodeal Inc မှ. | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး |
Facebook ကတွစ်တာLinkedIn တို့ထုံးစံဓလေ့